\_ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ နှလုံးသားတစ်စုံကို ခံစားချက်တွေ သွင်းပေးခဲ့တဲ့ ပုံရိပ် – Local News
ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ နှလုံးသားတစ်စုံကို ခံစားချက်တွေ သွင်းပေးခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်
သင်မငိုပါနဲ့ အတူလက်တွဲ ခိုင်းမြဲတဲ့ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ အတူတူ ဒီကပ်ဆိုးကြီးကို ကျော်လွှားကြမယ်နော်
မအူပင်မြို့မှ အတည်ပြုလူနာ တစ်နှစ်ခုနှစ်လအရွယ် ကလေးငယ်၏ ထိတွေ့Quarantine အဆောင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှ မအူပင်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ပြောင်းရွေ့ နေသောပုံရိပ်
ဒါကြောင့် အိမ်မှာဘဲနေပါ လူစုလူဝေး ရှောင်ပါ အပြင်သွားတိုင်း မတ်တပ်ပေးပါ
လေးစားပါတယ် ဒေါက်တာခင်မာစိုး ပြည်သူကျမ်းမာရေးဌာန မအူပင်မြို့။
လူ ကို လူကပဲ စောင့်ရှောက်နိုင်မယ်.. မရေးတော့ဘူးလို့နေမလို့ပဲ၊ လူမသိတဲ့ အဖြစ်ပျက်တွေက ရင်ထဲပြည့်နေလို့..
မနက်ခင်းတိုင်း မှာ +တွေ့ရင် ခေါ်ပြီး ဆေးရုံပို့ကြ။ ဂိတ်က Q ဝင်မယ့်သူခေါ်ကြ။ Q ရက်ပြည့် ရှိရင်ပြန်ပို့ကြ ၊ ထမင်းသမားတွေက ထမင်းပို့၊ ရုံးအဖွဲ့တွေက ငွေလက်ခံ၊ စာရင်းလုပ် ဒီလိုပဲ ကိုယ့်တာဝန်တွေနဲ့ကိုယ် နေ့စဉ်လည်ပတ်နေကြတာ ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်ထက်မပိုသလိုပဲ သွားနေကြတယ်..
ဒါပေမယ့် ဒီမနက် ပို့ရမယ့် +က ရင်ခွင်ပိုက်အရွယ်ကလေး။ ကလေးမှာ တွေ့လို့ ပို့ရတာမျိုးမဟုတ် ဇတ်လမ်းက အမေမှာတွေ့ထားလို့ အမေက ဆေးရုံမှာ။ ကလေးက အဘွား နဲ့ Q ဝင်နေရင်း + တွေ့တာ။ +ဖြစ်လို့ ကလေးအတွက် ဝမ်းနည်းရမှာလား အမေနဲ့ပြန်ဆုံကြလို့ဝမ်းသာရမှာလား ဝေခွဲမရခဲ့ဘူး။ ပြသနာက ဒီကလေးကို ထွေးပွေ့ပြီး ဆေးရုံကို ဘယ်သူပို့မှာလည်း..?
အရင် +မှန်သမျှက လူကြီးတွေဆိုတော့ ကားတံခါးဖွင့်ပေးရုံ။ အခုက အမေက ဆေးရုံမှာ ကလေးကတစ်နေရာ ဒါနဲ့ သူ့အမေကို အရင်ဆေးရုံကသွားပြန်ခေါ်ပြီး ကလေးကိုချီခိုင်းမယ် စိတ်ကူးမိပေမယ့် စည်းကမ်းအရ မရပါတဲ့ ဒီတော့ နေလင်းအောင်က ချီပေးမယ်ဆိုသော်လည်း Q ဝင်ရမယ်ဆိုတော့ မဖြစ်ပြန် ။ ဒါနဲ့ အစ်မ (ဒေါက်တာခင်မာစိုး) က လာသာလာခဲ့ သူစီစဉ်ထားပြီးပြီဆိုလို့ ကလေးရှိရာ Q ကို ရောက်သွားတယ်။
အပြင်ကစောင့်နေရင်း PPE နဲ့ ကလေးကို တစ်ယောက်က လက်တစ်ဘက်ကချီ လက်တစ်ဘက်က အထုပ်ဆွဲပြီးထွက်လာတာမြင်တော့ ကားတံခါးဖွင့်၊ မှတ်တမ်းယူ ဒီအထိ ပုံမှန်ပါပဲ ခံစားချက်က။ ကားအရှေ့ခန်းကနေ တောင်ကြည့်လိုက်သေးတယ် PPE ဝတ်ထားပြီးကလေးကို ပေါင်ပေါ်တင်ထားရင်း လက်တစ်ဘက်ကနေ စက္ကူစလေးနဲ့ ချော့မြူနေတာမြင်ရတယ်။ ဒီအထိလည်း တာဝန်ပေးခံရတဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်လို့ပဲထင်တာ။
ဒါနဲ့ ကားထွက်လာပြီဆိုတာ အစ်မ (ဒေါက်တာခင်မာစိုး) ကို သတင်းပို့ဖို့ ဖုန်းဆက်တော့ မှ တစ်ဘက်ကဖုန်းကိုင်တဲ့ အသံက အစ်မမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့မှ ကားနောက်ခန်းထဲ သေချာမှန်ပေါက်ဝါးတားတားကနေကြည့် မိတော့မှ ရင်ထဲ တစ်မျိုးကြီးခံစားလိုက်ရတယ်။
ကျွန်တော်တွေးနေမိတယ်.. တပည့်တွေကို လုံးဝအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းကို ပေးမလျောက်တာ ခေါင်းဆောင်စိတ်ဓါတ်၊ ကလေးကို ကြုံတဲ့လူစိမ်းက PPE ကြီးဝတ်ပြီး ဝတ်ကျေတန်းကျေ ခေါ်သွားလို့ လမ်းမှာကလေးလန့်သွားမှာ မလိုလားတဲ့ မိခင်စိတ်.. အဲဒိနှစ်ခုစလုံးကိုမြင်လိုက်ရတယ်။
ကျွန်တော့်အတွက် ဒီကိုဗစ်ကာလမှာ ဒီနေ့ဟာ ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ လူသားဆန်တဲ့ အပြုမူကို အနီးကပ်မြင်လိုက်ရတဲ့နေ့ပါ။ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး မှာ ကလေးကိုချော့နေတာ၊ကလေးနဲ့အထုပ်ဆွဲထွက်လာတာ၊ ကားပေါ်ကဆင်းပြီး ward ထဲကိုချီပြီးဝင်သွားတာတွေဟာ ကြည့်မိတိုင်း ခံစားရပါတယ်။
အားလုံးရဲ့ မေတ္တာတွေကြောင့် +ဖြစ်နေသူတွေအားလုံး အိမ်အမြန်ပြန်ရပြီး ကွဲကွာနေတဲ့ မိသားစုတိုင်း ပြန်ဆုံကြပါစေ..
ကြှနျတျောတို့အားလုံးရဲ့ နှလုံးသားတဈစုံကို ခံစားခကျြတှေ သှငျးပေးခဲ့တဲ့ ပုံရိပျ
သငျမငိုပါနဲ့ အတူလကျတှဲ ခိုငျးမွဲတဲ့ခဈြခွငျးတှနေဲ့ အတူတူ ဒီကပျဆိုးကွီးကို ကြျောလှားကွမယျနျော
မအူပငျမွို့မှ အတညျပွုလူနာ တဈနှဈခုနှဈလအရှယျ ကလေးငယျ၏ ထိတှေ့Quarantine အဆောငျ ကှနျပြူတာတက်ကသိုလျမှ မအူပငျမွို့ ပွညျသူ့ဆေးရုံသို့ ပွောငျးရှေ့ နသေောပုံရိပျ
ဒါကွောငျ့ အိမျမှာဘဲနပေါ လူစုလူဝေး ရှောငျပါ အပွငျသှားတိုငျး မတျတပျပေးပါ
လေးစားပါတယျ ဒေါကျတာခငျမာစိုး ပွညျသူကမျြးမာရေးဌာန မအူပငျမွို့။
လူ ကို လူကပဲ စောငျ့ရှောကျနိုငျမယျ.. မရေးတော့ဘူးလို့နမေလို့ပဲ၊ လူမသိတဲ့ အဖွဈပကျြတှကေ ရငျထဲပွညျ့နလေို့..
မနကျခငျးတိုငျး မှာ +တှရေ့ငျ ချေါပွီး ဆေးရုံပို့ကွ။ ဂိတျက Q ဝငျမယျ့သူချေါကွ။ Q ရကျပွညျ့ ရှိရငျပွနျပို့ကွ ၊ ထမငျးသမားတှကေ ထမငျးပို့၊ ရုံးအဖှဲ့တှကေ ငှလေကျခံ၊ စာရငျးလုပျ ဒီလိုပဲ ကိုယျ့တာဝနျတှနေဲ့ကိုယျ နစေ့ဉျလညျပတျနကွေတာ ပုံမှနျဖွဈစဉျထကျမပိုသလိုပဲ သှားနကွေတယျ..
ဒါပမေယျ့ ဒီမနကျ ပို့ရမယျ့ +က ရငျခှငျပိုကျအရှယျကလေး။ ကလေးမှာ တှလေို့ ပို့ရတာမြိုးမဟုတျ ဇတျလမျးက အမမှောတှထေ့ားလို့ အမကေ ဆေးရုံမှာ။ ကလေးက အဘှား နဲ့ Q ဝငျနရေငျး + တှတေ့ာ။ +ဖွဈလို့ ကလေးအတှကျ ဝမျးနညျးရမှာလား အမနေဲ့ပွနျဆုံကွလို့ဝမျးသာရမှာလား ဝခှေဲမရခဲ့ဘူး။ ပွသနာက ဒီကလေးကို ထှေးပှပွေီ့း ဆေးရုံကို ဘယျသူပို့မှာလညျး..?
အရငျ +မှနျသမြှက လူကွီးတှဆေိုတော့ ကားတံခါးဖှငျ့ပေးရုံ။ အခုက အမကေ ဆေးရုံမှာ ကလေးကတဈနရော ဒါနဲ့ သူ့အမကေို အရငျဆေးရုံကသှားပွနျချေါပွီး ကလေးကိုခြီခိုငျးမယျ စိတျကူးမိပမေယျ့ စညျးကမျးအရ မရပါတဲ့ ဒီတော့ နလေငျးအောငျက ခြီပေးမယျဆိုသျောလညျး Q ဝငျရမယျဆိုတော့ မဖွဈပွနျ ။ ဒါနဲ့ အဈမ (ဒေါကျတာခငျမာစိုး) က လာသာလာခဲ့ သူစီစဉျထားပွီးပွီဆိုလို့ ကလေးရှိရာ Q ကို ရောကျသှားတယျ။
အပွငျကစောငျ့နရေငျး PPE နဲ့ ကလေးကို တဈယောကျက လကျတဈဘကျကခြီ လကျတဈဘကျက အထုပျဆှဲပွီးထှကျလာတာမွငျတော့ ကားတံခါးဖှငျ့၊ မှတျတမျးယူ ဒီအထိ ပုံမှနျပါပဲ ခံစားခကျြက။ ကားအရှခေ့နျးကနေ တောငျကွညျ့လိုကျသေးတယျ PPE ဝတျထားပွီးကလေးကို ပေါငျပျေါတငျထားရငျး လကျတဈဘကျကနေ စက်ကူစလေးနဲ့ ခြော့မွူနတောမွငျရတယျ။ ဒီအထိလညျး တာဝနျပေးခံရတဲ့ ဆရာမတဈယောကျလို့ပဲထငျတာ။
ဒါနဲ့ ကားထှကျလာပွီဆိုတာ အဈမ (ဒေါကျတာခငျမာစိုး) ကို သတငျးပို့ဖို့ ဖုနျးဆကျတော့ မှ တဈဘကျကဖုနျးကိုငျတဲ့ အသံက အဈမမဟုတျဘူး။ ဒီတော့မှ ကားနောကျခနျးထဲ သခြောမှနျပေါကျဝါးတားတားကနကွေညျ့ မိတော့မှ ရငျထဲ တဈမြိုးကွီးခံစားလိုကျရတယျ။
ကြှနျတျောတှေးနမေိတယျ.. တပညျ့တှကေို လုံးဝအန်တရာယျဖွဈနိုငျမယျ့နညျးလမျးကို ပေးမလြောကျတာ ခေါငျးဆောငျစိတျဓါတျ၊ ကလေးကို ကွုံတဲ့လူစိမျးက PPE ကွီးဝတျပွီး ဝတျကတြေနျးကြေ ချေါသှားလို့ လမျးမှာကလေးလနျ့သှားမှာ မလိုလားတဲ့ မိခငျစိတျ.. အဲဒိနှဈခုစလုံးကိုမွငျလိုကျရတယျ။
ကြှနျတေျာ့အတှကျ ဒီကိုဗဈကာလမှာ ဒီနဟေ့ာ ပုံမှနျဖွဈစဉျမြိုးမဟုတျဘူး။ လူသားဆနျတဲ့ အပွုမူကို အနီးကပျမွငျလိုကျရတဲ့နပေ့ါ။ ဗီဒီယိုဖိုငျလေး မှာ ကလေးကိုခြော့နတော၊ကလေးနဲ့အထုပျဆှဲထှကျလာတာ၊ ကားပျေါကဆငျးပွီး ward ထဲကိုခြီပွီးဝငျသှားတာတှဟော ကွညျ့မိတိုငျး ခံစားရပါတယျ။
အားလုံးရဲ့ မတ်ေတာတှကွေောငျ့ +ဖွဈနသေူတှအေားလုံး အိမျအမွနျပွနျရပွီး ကှဲကှာနတေဲ့ မိသားစုတိုငျး ပွနျဆုံကွပါစေ..
ပွေး၊ ညှင်း၊ တင်းတိတ် အတွက် ငါးရက်အတွင်း သက်သာ ပျောက်ကင်းစေတဲ့ မြန်မာ့ ရိုးရာလိမ်းဆေး